Ukusebenzisa i-Web Analytics | Martech Zone
ULwesithathu, May 14, 2008 ULwesithathu, May 14, 2008 Douglas Karr
Abantu abaningi babheka ukumiswa kwesayithi okujwayelekile futhi babona iWebhusayithi ekhomba ku-Call to Action bese bekala leyo Call to Action nge-Analytics, bayibiza ngokuthi Ukuguqulwa. Ukube ubungakudweba lokho, kubukeka kanjena:
Inkinga, yiqiniso, ukuthi i-Web Analytics ibeka ama-TONS wamatshe ayigugu afihliwe wedatha okungekho muntu owanakayo noma awasebenzise. Imvamisa, i-Analytics isetshenziswa kuphela ukukala imithombo, ukusesha, ukuchofoza nokuguqulwa. Kusetshenziswa leyo mibiko, uchwepheshe Wezokumaketha bese enza ukulungisa okuthile namawashi ukuze abone ukuthi kwenzekani emibikweni. Lo mjikelezo wethemba (unethemba lokuthi kukhona okuguqukayo) kwenzeka kaninginingi.
Iparadigm yokubheka i-Analytics njengoba nje i-interface yokubika kufanele ishintshe. I-Analytics ayisona nje isikhombimsebenzisi sokubika, yindawo yokugcina amanani entengo yokuziphatha kwezivakashi. Kusetshenziswe ngobuciko, ungahlanganisa okuqukethwe kwangempela kuwebhusayithi yakho ne- analytics idatha ukunikela ngokunamandla kokuqukethwe ukukhomba kangcono izivakashi zakho.
Ezinye Izibonelo Zokuhlanganiswa Kwezibalo zeWebhu
Unezivakashi ezi-2 eziya kuwebhusayithi yakho ezilandelwa uhlelo lwakho lokusebenza lwezibalo. Isivakashi esisodwa sihlala sivakashela isiza sakho sisuka endaweni efanayo. Ezinye izivakashi ziyavakasha kodwa ukunyakaza kwakhe kulandelwa kulo lonke elaseMelika naseCanada. Ngamanye amagama, unezivakashi ezi-2 ezibandakanyekile, kepha omunye uyisihambi kanti omunye akayona.
Kungenzeka kanjani ukuthi umkhiqizo wakho, insizakalo, noma umyalezo wakho umane uqondaniswe nesihambi kunokuba ungahambi? Mhlawumbe uthengisa i-elektroniki kusayithi lakho. Umhambi kufanele abone amalaptop angasindi, izikhwama zokuhamba namanye amathuluzi. Ongahambi kufanele abe nokukhonjiswa kwamakhompyutha wakho wasekhaya nowebhizinisi - mhlawumbe uchungechunge lwakho lokuboniswa okukhulu.
Mhlawumbe une 'road show' lapho uvakashela khona amadolobha amakhulu ukukhombisa imikhiqizo yakho. Okomuntu ongahambi, kufanele ukhawulele imininingwane yombukiso womgwaqo esifundeni abakuso. Kumhambi, ungalungiselela ukubonisa kombukiso wemigwaqo emadolobheni azungeze imizila yokuhamba yomuntu.
Uma uyindawo yokudlela, mhlawumbe ufuna ukukhombisa amanye amaketanga akho emzileni wabahambi ngomyalezo ngohlelo lwakho lwemiklomelo olutholakala ezweni lonke. Kumuntu ongahambi, umlayezo ovela kubanikazi noma abapheki noma imenyu yakho entsha yokukhipha.
Uma uyi-Advertising Agency, mhlawumbe kufanele ngabe ukhombisa umsebenzi wamakhasimende wasendaweni kwabangahambi, nama-akhawunti kazwelonke kusihambi.
IJografi kumane nje kuyisici esisodwa sokusebenzisa i-Analytics. Uma uyisitolo sobucwebecwebe, ungahle uthande ukukhangisa ukuthengisa kwakho kwe-Anniversary esivakashini esathenga isongo se-Anniversary emasontweni angama-50 edlule. Uma uyibhange, mhlawumbe ufuna ukukhuphula amanani akho emalimboleko ngesonto ngaphambi kokuba kukhokhwe inkokhelo elandelayo. Uma ungumthengisi, ungafuna ukukhangisa amanani akho okuhweba emotweni engiyithenge kuwe.
Okuqukethwe kweDynamic kube khona isikhathi eside eMkhakheni We-imeyili. Kunezindunduma zobufakazi bokuthi ukwenza ngezifiso okuqukethwe kokuziphatha kwezivakashi kuveza imiphumela ephakeme kakhulu. Isikhathi sokuthi izinkampani ezithuthukisa iwebhu nezinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe ziqale ukunaka lokhu. Ukuhlanganisa i-Web Analytics ku-CMS yakho kuzothuthukisa imiphumela emikhulu.
Ngeshwa, amaphakheji wamahhala afana neGoogle Analytics awanikeli i- API noma izinga lokuhlanganiswa lapho ungasebenzisa khona idatha yangaphakathi. Kodwa-ke, izinkampani eziningi ezinkulu zeWeb Analytics ziyakwenza. Lo mehluko kuzici ungabiza inkampani yakho amashumi ezinkulungwane zamaRandi - kepha uma uwusebenzisa kahle, imbuyiselo yotshalo-mali iyoba yinhle.
Tags: i-apula i-apulaukumaketha kwe-bluetoothukusondela kwe-bluetoothukumaketha okusondele kwe-bluetoothedgerankilinganiswa kanjani i-kloutukusondelana nokumakethazikhiphe ohlwini
May 15, 2008 ku-3: 29 PM
Ngasekuqaleni kwaleli sonto ngikhulume nenkampani ebizwa ngeXtract, ezinze eFinland. Zigxile ekuqondisweni kokuziphatha futhi muva nje, ikakhulukazi imithombo yezokuxhumana. Kusukela ngikhulume nabo, ngaqala ukubheka ezinkampanini ezifanayo futhi ngathola isiqalo esibizwa ngeSometrics (US Based). Isici esivamile kwakuyikhono lokuhlinzeka ngamanethiwekhi omphakathi amasha ngolwazi lokuhlaziya mayelana nezithameli zabo. Lokhu-ke, kukhuphula inani lokukhangisa lokuqhuba imikhankaso ngalezi zingosi zokuxhumana nabantu abavela eceleni.
Ngaphezu kwalokho, ngibheke ukuthengwa okwenziwe yiGoogle kule minyaka embalwa edlule nokuthi bawakha kanjani umbuso wabo. Usho ukuthi i-Google analytics ayinikezi i-API njengamanje, kepha ngicabanga ukuthi bazoyenza kungekudala. Ngaphezu kwalokho, isibonelo sokuthi wena ungasetshenziswa iJografi lapho ukhomba singathathwa sinyathelo esilandelayo ngayo yonke imephu etholakalayo nobuchwepheshe bokulandelela obutholakala manje emakethe. Ngibhale phambilini namuhla mayelana neGoogle neYahoo Maps.
Ukuqagela nje kulesi sigaba, kepha kuthiwani uma inkampani efana noGarmin ingangena ebhizinisini lokuhlaziya nokumaketha. Bazokwazi ukunikela ngezinhlelo zabo ze-GPS bese beyifaka esikhundleni semodeli esekelwayo ekhangisiwe. Kusetshenziswa ubuchwepheshe bembondela obungaphazamisi imininingwane yomzila wesibukeli, ukuqinisekisa ukuthi isipiliyoni somsebenzisi asiguquki, izikhangiso zinganikezwa ezihlelwe ngokuphelele kumhambi. Thatha enye inothi ngokuqhubekayo bese ufaka esibonelweni sakho sesitolo sobucwebe futhi unokukhangisa kweselula kwe-3.0. Okuhlosiwe, okusebenziseka kalula futhi okufundisiwe ngezibalo zomkhankaso.
May 15, 2008 ku-10: 26 PM
Amasenti ami ama-2 nje kuphela: Ngibikezela i-Google Analytics API ezinyangeni eziyisithupha ezilandelayo.
May 16, 2008 ku-6: 42 AM
IGoogle ithambekele kakhulu kuma-API ngakho-ke ngiyamangala ukuthi bekungakabibikho eyodwa kuze kube manje. Ngingathanda ukubona 'izibangela' zezibalo ze-Analytics .. ngamanye amagama .. ikhono lokwenza izicelo eziphumayo. Ama-API ayamangalisa, kepha awusakwazi ukwenza umcimbi uze uphele.